लकडाउन उल्लंघन गरे के हुन्छ कारबाही?
नेपाल लाइभ सोमबार, चैत १०, २०७६, २१:११
काठमाडौं- सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिनका लागि चैत ११ गतेदेखि १८ गतेसम्म लकडाउन गरेको छ। कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले मंगलबारबाट लागू हुने गरी लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो।
संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार लकडाउन अवधिमा सरकारले प्रतिबन्ध गरेका काम गरे १ महिनासम्म वा १ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। 'व्यवस्था अनुसार आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिउपर १ महिनासम्म कैद वा रु. १०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ,' ऐनमा उल्लेख छ। ऐनसम्बन्धी मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसका साथै तोकिएको काम गर्ने अधिकारीलाई बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्थासमेत गरेको छ।
सोमबार फ्रान्सबाट आएकी एक युवतीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिएपछि सरकारले देशभर अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै बन्द गर्न आदेश दिएको छ।